what is carders & what are they ????? | Shwekoyantaw
Published : 9:31 PM Author : shwekoyantaw
ခုတလော ဟို ဟို ဒီ ဒီ ကြည့်လိုက်ရင် carders, carding, fraud, cc, vbv စတာတွေအတွေ့ များလာပါတယ်.. အဲ့ဒိတော့ ကျနော်လည်း နည်းနည်းလိုက်ပြီးစူးစမ်းကြည့်တာပေါ့ .. ဒီကလူတွေလည်း carders တွေအကြောင်းပြောတာ / ဆွေးနွေးတာလည်းသိပ်မတွေ့ သလိုပပါပဲ (ကျနော်ပဲ ကန်းနေလားမသိ ) ဒါကြောင့်ကျနော်လည်း ကျနော်သိသလောက် ပြန်ပြောပြကြည့်မယ်ဗျာ .. အကုန်လုံးမှန်မယ်လို့ လည်း ကျနော်အာမမခံနိုင်သလို ကျနော်မှားနေရင်လည်း ဝင်ပြီးထောက်ပြပေးနိုင်ပါတယ်.. open discussion အနေနဲ့ ပဲဆွေးနွေးမှာပါ .. ကဲ...စမယ်ဗျာ ...
carder ဆိုတာဘာကြောင့် လူတွေစိတ်ဝင်စားလာကြလဲဆိုရင် .. ကျနော်ကြုံ ခဲ့ရတာလေးနဲ့ ပြောပြပါမယ်...
ကျနော့်ဘော်ဒါတကောင် .. online က arab တကောင်နဲ့ ဆွေးနွေးဖြစ်တယ် ..
: - သူကပြောတယ် underground hacking ဖိုရမ်ကနေ carder ဖိုရမ်တောင်ဖြစ်ပီတဲ့ .. hacker တွေရဲ့community တောင်မှေးမှိန်လာပါသတဲ့ ...
: - ကျနော် ကလဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် ဟုတ်တယ်လို့show-off မှာ viewing ၁၅ ယောက်ပဲရှိမယ်.. carder တွေ cc/paypal တွေ အကောင့် dump တဲ့ account dump section မှာ လူက ၁၀၀ ကျော်ကအဲဗားပဲလို့ 
>>>>> ဒါနဲ့ သူလည်း carder ပဲလုပ်တော့မယ်တဲ့ ..... ကဲကောင်းရော ....
:- နောက်တယောက်က coder ပါ .. သူလည်းညည်းရှာပါတယ်.. အရမ်းကိုခက်ခဲတဲ့ tools တွေကို အပင်ပန်းခံ ခေါင်းရှုပ်ခံပြီးလုပ်တာတောင် သူ့ အတွက်ပြန်လာတဲ့ feedback/respect က မရသလောက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ .. အပင်ပန်းခံလုပ်ထားတောင်မှ ကျေးဇူးတင်တယ်တောင်ပြောမသွားဘူးတဲ့ .. .( views ကသာ ရာကျော်ရှိတယ်.. thanks ရတာ.. 3-4 ခုရယ် ) ကဲ သူလည်း carder ဆိုတာစလေ့လာနေပါပီတဲ့ ... အော်. coder ကြီးတောင်... ဖြစ်ပုံက
carder ဆိုတာ hacker ပဲလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ် .. ကျနော်ကတော့ ဟုတ်တယ်လို့ လည်းပြောလို့ ရသလို မဟုတ်ဘူလို့ လည်းပြောလို့ ရတယ်လို့ ထင်ပါတယ်.... ဘာလို့ လဲဆိုတော့အောက်မှာကျနော်ထပ်ရှင်းမှာပါ ... carder တယောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းကိုပြောရရင်တော့ ပြောစရာတွေတပုံတပင်ကြီးပေါ့ဗျာ ..
carder ဆိုတဲ့အတိုင်း သူအလုပ်လုပ်တာကိုက illegal case တွေပါပဲ .. သူအလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာကိုလည်း black market လို့ ပြောလို့ရပါတယ် ..
သူတို့ ဘာတွေနဲ့ လုပ်လုပ်လဲ ...... ကျနော်သိသလောက်ကတော့ credit card တွေ bank account တွေ paypal စတဲ့ online money puchase/transfer လုပ်ငန်းတွေနဲ့ တရားမဝင်အလုပ်လုပ်ပါတယ်..ဘာလို့ တရားမဝင်တာလဲဆိုတော့ သူတို့ မှာ ရှိတဲ့ credit card, paypal စတာတွေဟာ လူများဆီက ခိုးထားတာတွေပါ ( ခိုးတာလည်းနည်းမျိုးစုံနဲ့ ပါပဲ .. ဒါကြောင့် carder အကြောင်းကိုပြောရရင် korea ဇတ်လမ်းတွဲတွေဖြစ်ကုန်မယ် )
ကဲ သူတို့ အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ရအောင် .....
ဥပမာဗျာ ... iphone တလုံးကိုအပြင်မှာ ဘယ်ဈေးလောက်ပေါက်တယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့it လူတိုင်း အနည်းဆုံးတော့ ခန့် မှန်းခြေသိကြမှာပါ .. 600-800 တခုခုပေါ့ဗျာ ... ကဲ အဲ့လောက်ရှိတာကို 50 လောက် နဲ့ ဝယ်လို့ ရမယ်ဗျာ ... လုံးဝ brand အသစ် .. ကဲ...ခင်ဗျားတို့ ယုံလား .. မယုံမရှိနဲ့ အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်... carder တွေရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာပဲ ပစ္စည်းအတွက် ဈေးဆိုတာက ... သိပ်သဘောကောင်းတဲ့ carder နဲ့ တွေ့ ရင်တော့ Iphone တလုံးကို 10 နဲ့ ပေးမယ်ဗျာ .. သူတို့ နဲ့ သိပ်ခင်တာတို့ တာ့ ဥပမာ .. ခင်ဗျားက mod တို့admin တို့ ဆို ဖားတဲ့အနေနဲ့ ခင်ဗျားကို carder တယောက်က phone တလုံးကို အလကားတောင်ပေးဦးမယ်ဗျာ .. ဒီလိုလုပ်ချင်းအားဖြင့် ခင်ဗျား (carder) အပေါ်မှာ ယုံကြည်ကြပြီးတော့ customer တွေများလာအောင်သူ့ ဘက်ကဆွယ်တဲ့ သဘောတွေလည်းပါတာပေါ့ .....
ကဲ.. ဒီနေ့ တော့ ဒီလောက်ပဲဗျာ ... ညောင်းတယ်စာရေးရတာ...ပျင်းပါတယ်ဆို (မရေးလို့ ကလည်းမဖြစ်.. ဘာမှလဲမရေးပြဖူးဆိုပြီး မျက်စောင်းတွေကထိုးနေတော့ ) ဒီကလူတွေ carder ဆိုတာတနဲ့ ရင်းနီးအောင်အစပျိုးလိုက်ပါပြီ
သူတို့ တွေ .. ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြသလဲ .. သူတို့ ဘာတွေနဲ့ လုပ်ကြသလဲဆိုတာ .. ကျနော်သိသလောက်တော့ ပြောပြပါမယ်... ကျနော် အနီးစပ်ဆုံးတော့ပြောပေးပါ့မယ်.. မှားတာရှိရင် ခွေးလွှတ်ကြပါလို့..
>>> တကယ်တော့ carder လုပ်ဖို့official အကောင့်တစ်ခုတော့ ရှိရမယ်ဗျ ... ပြီးတော့ အဲ့အကောင့်ကလည်း ဘာ illegal case နဲ့ မှမညိအောင်အတတ်နိုင်ဆုံး ကင်းကင်းရှင်းရှင်း ငွေအပြောင်းအလဲလုပ်ရပါမယ်....
>>> carder တယောက်ဖြစ်ဖို့အနည်းဆုံး phising တော့တတ်ရပါမယ်.. phising ဆိုတာ ကလေးကလားဆိုပြီး တချို့ ကပြောချင်ကြတယ်.. အမှန်တကယ် သူလည်းသူ့ ပညာနဲ့ သူပါပဲ ... တချို့ ဆို gmail, facebook တင်မကဘူးး ... paypal, visa, libertyreserve စတဲ့ online money transfer နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ ဆိုကဒ်အတုတွေတောင် လုပ်ကြပါတယ်.. တချို့ ကလည်အးလွယ်ပြောတယ်.. phising ဆိုတာလွယ်ပါတယ်တဲ့ index page မှာ source code ကို ဖွင့် link ပေးတဲ့နေရာမှာ နေရာလွဲပြီးတော့ ကိုယ့် hosting မှာ .txt ဖိုင်တခုနဲ့ သိမ်းလို့ ရရင်ပြီးရောပေါ့တဲ့ ... ကဲ .. အခု ... libertyreserve ဆိုက်ဒ်ကို လုပ်ကြည့်ပါ အဲ့လိုရရင် တစ်သန်းကြေးတောင် လောင်းလိုက်ချင်သေး ( နီကိုရဲ စတိုင် ) liberty reserve မှာဆို ကိုယ့်အကောင့်ထဲရောက်ဖို့pincode ပါဖြည့်ရပါတယ် ... login page ပြီး၇င် pincode page ရောက်သွားပါရောလား .. ဒါတောင် သူတို့ က keylogger ရန်ကို ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့pincode ကို OSK ( on screen keyboard ) လိုမျိုး click ထောက်ပြီးဖြည့်ခိုငိးတာပါ... ကဲ ခင်ဗျား လွယ်ပါတယ်လို့ ပြောတဲ့ phising အခုဘယ်လိုလုပ်မလဲ ... ............ ကဲ ကဲ တော်ပါပြီ... phising တွေတောင်ရောက်ကုန်ပီ .. . အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာ ... libertyreserve တို့western union transfer ဆိုက်ဒ်အတုတို့လုပ်ပြီး ခိုးတတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်......
>>> carder တယောက်ကနောက်ထပ် hacking skill လဲကောင်းရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ ... google ဒါမှမဟုတ် search-engine တခုခုမှ shop တွေသီးသန့် ရှာတဲ့ dork နဲ့လိုက်ရှာမယ်... ဖောက်မယ်... cc (credit card) info တွေခိုးမယ်.. user info တွေခိုးမယ်.. အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ carder တယာက်အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ကိုယ့် victim email တွေရဖို့ ပါပဲ .. ဘာလို့ လဲဆိုတော့ shop ဆိုက်ဒ်မှာ register လုပ်ထားတဲ့ user တွေဆိုမှတော့ သူတို့ ဆီမှာ . online money transfer အကောင့် အနဲဆုံးတော့ရှိမှာပဲလေ.. အဲ့တော့ random သောင်းချီရတဲ့ email list ထက် .. shop ဆိုက်ဒ်တွေကရတဲ့ email list ကသယ်ဟာပိုကောင်းဆိုတာ .. သိလောက်မယ်ထင်ပါတယ်.. shop ဆိုက်ဒ်တခုမှာ shell တင်လို့ ရရင် email list ကို ရအောင် ၁၀ စက္ကန့် လောက်နဲ့ ရအောင် လုပ်လို့ ၇တဲ့ နည်းရှိပါတယ်. .နောက်အပိုင်းတွေမှာ ထည့်ရေးထားမှာပါ .. မကြာမီလာမည် မျှော်..... ဟုတ်တယ်လေ.. တခုချင်းစီ clt+c ... clt+v လုပ်မလား user ထောင်ဂဏန်း သောင်းဂဏန်းဆို ... သေပြီဆရာပေါ့ အဲ့လိုလုပ်နေရင်
>>>> ကဲအဲ့မှာ မေးစရာရှိလာပါတယ်.. carder တယောက်ကသူခိုးခို့ ရလာတဲ့အကောင့်ထဲက money တွေကို ကိုယ့်အကောင့်ထဲ တန်းလွှဲလိုက်ပေ့ါ .. ဘာလို့အောက်ဈေးနဲ့stuff တွေလိုက် ရောင်းနေမှာလဲ................................................. ဟုတ်ကဲ့ . .တချို့ လဲရှိပါတယ်.. သူတို့ ကတော့ online အတွက်ပဲ စဉ်းစားပါတယ်.. online မှာပဲ Purchase လုပ်မယ်ပေါ့ ... တကယ့် carder တွေက အပြင်မှာပါ .. ဘဏ်တွေကနေ သွားထုတ်ပါတယ်.. ကဲ .. ခင်ဗျား ..ခိုးထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ .. အပြင်မှာတကယ်သွားထုတ်ရဲလား ????????????? ဘဏ်မှာထုတ်တာတောင်မပြောပါနဲ့ ... ကိုယ် တရားမဝင် လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေတောင် trace လိုက်ခံနေရလို့ကျနော်သိတဲ့ ဖိုရမ်တခုက member တယောက် သူ့computer ဖောမက်ချပြီး online ပါ မတတ်တော့ဘူး ... တပတ်လောက်ငြိမ်လိုက်ရပါသတဲ့ .. ရဲကသူ့ အိမ်ရောက်လာလို့ တဲ့ .. suspect လောက်ပဲမလို့ သူခံသာသွားတယ်.. ပြီးတော့ သူ ကလည်းရဲလာတုန်းက အိမ်မှာမရှိတာပိုကောင်းသွားတယ်.. case ကလည်း suspect ဆိုတော့ ရဲတွေကလည်းချက်ချင် အိမ်ကိုဝင်မစစ်ပဲ .... မေးယုံဖြစ်လို့ ပြန်သွားပြီး နောက်တနေ့ မှပဲပြန်လာမယ်ဆိုတော့ ... ငနဲကအိမ်လည်းပြန်ရောက်ရော .. .computer ကိုအကုန်ဖျက် ဖောမက်ချ .. အသစ်ပြန်တင်ချိန်ရသွားတယ်.. တော်သေးတာပေါ့ ... နောက်နဲနဲငြိမ်လိုက်ရပါလေရော .. ကဲ ဘယ်လောက် အန္တရယ်များလဲဆိုတာ ........................
>>>> ကဲအဲ့တော့ ကျနော်အပေါ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ့် official အကောင့်ကို ဘာ illegal case နဲ့ မှမညိအောင်ထား .... ဥပမာ .... ipod ၅၀ နဲ့card လုပ်မယ်... တင်တယ်.. customer တယောက်လာဝယ်တယ်.. သူက ခိုးလို့ ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ebay လိုမျိုး online shop ဆိုက်ဒ်ကြီးကနေ ဝယ်ပေးလိုက်မယ်... ဘယ်နေ့ track နံပတ် ဘယ်လောက် ... ဘယ် ship နဲ့.. ဆိတ်ကမ်း xxx (drop) မှာချမယ်... ဆိုပြီးလုပ်ပေးလိုက်ပါရော ( သူခိုးထားတဲ့ အကောင့်တွေထဲက ပိုက်ဆံနဲ့ ) အဲ့တော့ customer ကလည်း ဝယ်မယ် ... ကဲ ... အဲတော့ သူကပြောတယ်.. ငါ့အကောင့် xxxx ကိုပိုက်ဆံလွှဲလိုက်လို့( သူ့ ရဲ့official အကောင့်ပါ ) ... ကဲ ... မမိုက်ဘူးလား ... customer ဆီက official money .......................... ... ကဲ ဒီနေ့ တော့ ဒီလောက်ပဲ .. ညောင်းလာဘီ ... ..
နောက်မှ .. carder တွေ card တခုထဲနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး ... နောက်ထပ်ဘာတွေ လုပ်သလဲဆိုတာ ဆက်ပါမယ်... မကြာမီလာမည် ....
မှတ်ချက်။ ။ဒီပိုစ့်ကို ဘော်ဒါကြီး Dongoth ရေးပါသည်။
source from mmhackfroums.noonhost.com
Labels: knowledge, other |